Momba anay - Wuxi Maxwell Automation Technology Co., Ltd.
Wuxi Maxwell Automation Technology Co., Ltd. dia mampiasa vola dolara amerikana iray tapitrisa. Ao amin'ny Zone-Indostrian'ny Indostrian'ny teknolojia wuxi izahay. Miorina amin'ny fikarakarana kosmetika, fanafody, sakafo, indostria simika ary fampidirana miaraka amin'ny fampandrosoana, famokarana ary varotra isika.
Ny orinasanay dia mampiasa mpiasa 80 mahery, ny mpiasa maro no manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ity sehatra ity. Noho ny ezaky ny mpiasa iray manontolo dia lasa mpanamboatra lehibe izahay miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001: 2000. Ny orinasa dia nanandrana nanatsara ny kalitaon'ny vokatra ary nampiditra fitaovana avo lenta avy any Alemana. Ny fahaizan'ny famokarana isan-taona ankehitriny dia milina 800+.
Efa nafindra any Indonezia, Singapore, Frantsa, Alemana, Libya, africa atsimo, Aostralia, Amerika, Canada, Ekoador, Venezuela, Brezila, Russia ary firenena hafa sy faritra hafa koa ny milina.
Mampanantena ny orinasanay fa "vidiny mirary, vokatra avo lenta ary serivisy tsara varotra" ho anay. Manantena izahay fa hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa bebe kokoa hisian'ny fampandrosoana sy tombontsoa miaraka. Raisinay ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fitsidihanao ny tranokalanay.